Show All Most Popular Face Eye Lipstick Palette Beauty Tool Skin Care Perfume Cooling Gel Watermelon Series Bella Men Mask Sanitizer Pouch
No.10, Khapawng Street, (Near Bikeworld Pizza), Yangon, MM Hlaing
Monday09:30 -4PM
Tuesday09:30 -4PM
Wednesday09:30 -4PM
Thursday09:30 -4PM
Friday09:30 -4PM
Superstar Foundation (15g)
Superstar Powder Pact 4.5g
InstaBrow 3D Tattoo Tint – Eyebrow Pen (5.5g)
တစ်မိနစ်အတွင်း ဇင်ယော်တောင်ပံလေးတွေလို မျက်ခုံးထူထူလေးဖြစ်သွားစေတဲ့ Insta Brow 3D Tattoo Tint
3-In-1 Metallic Matte Color Stick (2.3g)
Bella Serum Sheet Mask
Love Glow (Highlight + Blush)
Golden Academy – Golden Perfection Palette (8.5g)
• ရွှေရောင်ကံကောင်းမှုတွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Golden Perfection • တည်ငြိမ်လင်းလက်တဲ့ ညှို့မျက်ဝန်းတစ်စုံအတွက် • ရွှေရောင်တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ • ရွှေမှုန် ငွေမှုန်တွေ ဖြန့်ကြဲထားသလို လှပတည်ငြိမ်တဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံဖြစ်ဖို့
Message Gel - Cooling Gel (50g)
Gel Liner (0.3ml)
• နက်မှောင်တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းဝိုင်းဝိုင်းလှလှဖြစ်ဖို့ Bella ခဲတံနဲ့ လွယ်လွယ်လေးဆွဲမယ်
• မိုးရာသီမှာ ပန်ဒါ မျက်လုံးလေးမဖြစ်ဖို့ Gel Eye Liner လေးသုံးကြမယ်
• ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ တောက်ပနက်ရှိုင်းတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံဖြစ်ဖို့
Iconic Brow Mascara (4.5g)
• တစ်ခါဖြီးတာနဲ့ တစ်နေကုန်ပုံမပျက်ပဲ သဘာဝကျပြီး ဇင်ယော်မျက်ခုံးလေးလို လှနေစေမယ့် • ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ဇင်ယော်တောင်လေး လို လှနေဖို့ • ရေစိုခံတဲ့ မျက်ခုံးအလှ • သဘာဝအတုိင်း မျက်ခုံးထူထူလေး • သေသပ်လှပသော မျက်ခုံးတစ်စုံ ဖြစ်ဖို့
All in one Dream Matte Powder Cushion
• တစ်ခါပုတ်တစ်နေကုန်လှ အဆီထိန်းပြီးဖုန်ဖုန်လေးနဲ့လှနေမှာ
All in One Dream Matte Powder Cushion (ပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ်းနော်)
• အချိန်ကုန် ငွေကုန်သက်သာပြီး တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှတရား
• နေလောင်ဒဏ်ခံပြီး...အဆီမပြန် … ဝက်ခြံကင်း …မိတ်ကပ်မကွက်... တစ်နေကုန်ခံတဲ့ All in one cushion
• နူညံ့တဲ့အထိအတွေ့ ပေါ့ပါးတဲ့ခံစားမှု မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်စိတ်ကူး All in One Dream Matte Powder Cushion
Thanakha Perfect Liquid To Powder Foundation (Pouch) 3g
Thanakha Perfect Liquid To Powder Foundation (Pouch) 15g
Thanakha – Perfect Matte Powder Cushion (6g)
• ရေစိုခံ ချွေးစိုခံ တစ်ခုတည်းသော bella ရဲ့သနပ်ခါး Power pact (ခရင်မ်ပတ်) နဲ့ဆို အဆီပြန်တာနဲ့ မိတ်ကပ်ကွက်တာကို Bye Bye ပြောလို့ရပြီနော်
• သနပ်ခါးလိမ်းထားသလို မျက်နှာလေးက ဖုန်ဖုန်လေးနဲ့ သနပ်ခါးရနံ့လေးက သင်းနေစေမယ့် • မွှေးကြိုင် အဆီကင်း ဖုန်ဖုန်လေးနဲ့ဝင်း
• ရေစို ချွေးစိုခံလို့ တစ်နေကုန်ဘယ်သွားသွား အလှမပျက်တဲ့ မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီနော် 5) အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းပေးတဲ့ ရေစိုခံ သနပ်ခါး ပေါင်ဒါ Pact
Thanakha Oil No More – Perfect Powder Pact 4.5g
Thanakha Mineral Loose Powder (6g)
• အဆီမပြန်ဘဲ ဖွေးဖွေးနုနု မှုန်မှုန်လေးနဲ့… တစ်နေ့ကုန်လှနေမယ့် သနပ်ခါး ပေါင်ဒါမှုန့် • နုပျိုပြောင်းလဲပြီး ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တဲ့ bella ရဲ့ Loose Powder
• ပိုးသားလို အထိအတွေ့နဲ့ သနပ်ခါးရနံ့ သင်းသင်းလေးကြောင့် ဖွေးဖွေးနုနု နှင့် တစ်နေကုန်လှစေမယ့် bella ရဲ့ Loose powder
• အဆီပြန်ခြင်းကင်းတဲ့ လှတစ်မျက်နှာ အတွက် သနပ်ခါး ပေါင်ဒါ
Thanakha 2-Way Pressed Powder Foundation (7g)
TNK Cushion Box (6g)
• သဘာဝအတိုင်း သနပ်ခါးရဲ့အေးမြမှုနှင့်အတူ ပြောင်ပြောင်လေးလှစေဖို့
• သဘာဝသနပ်ခါးရေကျဲလေးလိမ်းထားသလို လှချင်ရင်တော့ သနပ်ခါးကူရှင်တစ်မျိုးတည်းပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ်း
• ရေစို ချွေးစိုခံ အမည်းစက်ဖုံးပြီး သနပ်ခါးထူထူလေး လိမ်းသလိုလှချင်ရင်တော့ သနပ်ခါးမိတ်ကပ်ရည်နဲ့ ရောပြီးလိမ်းနော်
. တစ်နေကုန်ခံတာရယ် ရေစိုခံတာရယ်ကြောင့် မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်း လိုအပ်နေတာကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့ သနပ်ခါးကူရှင်
Thanakha – Perfect Matte Powder Cushion Refill (Pouch)
Artist Brush Waterproof Liquid Eyeliner 0.5g
• ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှပတဲ့ မျက်ဝန်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့
• စူးရှတောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ ဖြစ်ဖို့
• တစ်ခါဆွဲလိုက်ရင် တစ်နေကုန်မပျက်တဲ့ Extra Waterproof eye liner
3D Thick Long Curls – Lash Express Mascara (6g)
• အရုပ်မလေးလို ထူထဲရှည်လျားကော့ညွတ်တဲ့မျက်တောင် လေးဖြစ်ဖို့အတွက်
• ရေစိုတောင် မပျက်တဲ့ မျက်တောင်ထူထူလေး အတွက်
• ပြည့်စုံလှပတဲ့ မျက်တောင်လေးနှင့် မျက်ဝန်းလေးတစ်စုံအတွက်
• ရေစိုရင်တောင် အလှမပျက်တဲ့ မျက်တောင်ထူထူလေးအတွက်
• အရုပ်မလေးလို ထူထူရှည်ရှည်ကော့ကော့လေးနဲ့ 3D လို ဖြာထွက်နေတဲ့ မျက်တောင်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို
Superstar Lashes Mascara (8.5g)
• ပုံမှန်မျက်တောင်တွေထက် ပိုမို ထူထဲ၊ ရှည်လျားကော့ညွတ်စေဖို့
• ရေစိုရင်တောင် လုံးဝ မပျက်တဲ့ ရေစိုခံ မျက်တောင်ကော့ဆေး
• Biotin Victamin E နှင့် Jojoba Oil ပါဝင်သောကြောင့် ပိုမိုထူထဲပြီး သန်စွမ်းလာစေတယ်။
• အသုံးပြုရလွယ်ကူသော Brush ကြောင့် အလွယ်တကူကော့နိုင်ပါသည်။
• ပြီးပြည့်စုံပြီး လှပထူထဲတဲ့ မျက်တောင်လေးနဲ့ မျက်ဝန်းလေးတစ်စုံအတွက်
Power Brow – Waterproof Eyebrow Definer (0.3g)
• ချွန်စက်မလို (No Sharpening)။ • နူးညံ့သော Brush (Soft Belending) • တိကျသပ်ရပ်တဲ့ ပုံဖော်မှု(Teardrop Tip)
Super Star Lipstick (4.2g)
• Just one Swipe to be Super Star (တစ်ချက်ထဲ ဆိုး တစ်ခါတည်းလှ) • Super Pigmented • Super Long Wear • Super Soft and matte
Golden Academy Lip (2.3g)
• နေ့ရက်တိုင်း ကံကောင်းမှုတွေယူဆောင်လာပေးတဲ့ Golden Academy • Star များရဲ့ရွှေရောင်အိမ်မက် Golden Academy • တစ်ရောင်တည်းနဲ့ ၃မျိုးခြယ် အကယ်ဒမီ စပါယ်ရှယ် • ရွှေအဆင်းလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှတရား • လှပဆန်းသစ်တဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံအတွက် ဆေးရောင်ခြယ်လို့ရတဲ့ • ပါးပြင်ပေါ်မှာ Highlight တင်ထားသလို ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ လှနေစေဖို့ • လင်းလက်တောက်ပတဲ့ နှုတ်ခမ်းသား အသွင်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးတဲ့ • Lip Stick တစ်မျိုးထဲနဲ့နှုတ်ခမ်းနီရော၊ ပါးနီရော၊ Eye Shadow အနေနဲ့ပါ သုံးမျိုးခြယ်သနိုင်ပါသည်။
Rainy Day Lipsticks (4ml)
• မိုးလေးဖွဲတုန်း သတိရတယ် • အချစ်စွမ်းအားနဲ့ စွဲမက်ထင်ကျန်စေမယ့် နှုတ်ခမ်းတစ်စုံအတွက် • မိုးစက်တွေနဲ့အတူ အချစ်စွမ်းအားတွေ ထပ်တူကျစေဖို့ bella ရဲ့ Rainy Lip • မိုးရေစက်တွေကြားက တည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားကို ရယူလိုက်ပါ
Celebration Lip (4ml)
Superstar Favourite Matte Lip Tint – Lip Pouch
Superstar Creamy Matte Lipstick (4.2g)
Mogok Pauk Pauk – Perfect Look In A Palette (11.1g)
• မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့မျက်ဝန်း နန်းဆန်တဲ့ပါးပြင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှတရားအတွက် • မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ အလှ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့
Rainy Day Palette – Perfect In The Rain (7.8g)
"• သက်တန့်ရောင်မျက်ဝန်းလေးလို ရောင်စုံခြယ်လှစေမယ့် • Day Look ရော Night Look အလွယ်တကူ ပြင်လို့ရမယ့် • ချစ်စကားလေးတွေ မျက်ဝန်းကတစ်ဆင့် ဖော်ပြနိုင်ဖို့
Silicon Sponge (24m)
• မိတ်ကပ်ချွေတာရာလည်းရောက်၊ ညီညာပြီး လှလဲလှစေတဲ့ bella ရဲ့ Magic Sponge • မိတ်ကပ်နည်းနည်းလိမ်းရုံနဲ့ မိတ်ကပ်သားညက်ပြီး လှပနေစေမယ့်
Beauty Egg (6g)
• သိပ်သိပ်လေးဖြစ်ဖို့ bella ဥ လေးနဲ့ ပုတ်ပုတ်ပြီး လိမ်းပေးနော် • အလှဆုံးMakeup Look ရနိုင်ဖို့ bella ဥ လေးကို အမြန်ဆုံးပြေးဝယ်စို့ • မိတ်ကပ်သားသိပ်သိပ်လေး ဖြစ်ချင်ရင် bella ဥ လေးကို ရေစွတ်ပြီးသုံးပေးနော် • မိတ်ကပ်ညီညာလှပချင်ရင်တော့ bella ဥ လေးရှိမှ ဖြစ်မယ်နော်
ABC Beauty Company Limited
• ကြည်လင်စိုပြေ အိတ်ဆောင် အချစ်မျက်နှာသစ်ရေ • မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို အလွယ်ကူဆုံး အမြန်ဆုံးသန့်စင်ပေးတဲ့ • အလွယ်တကူ မျက်နှာသန့်စင်နိုင်တဲ့ ရေမလိုအချစ်မျက်နှာသစ်ရေ
• အချစ်တွေတိုးပွားစေမယ့်အနမ်းပွင့်ရေစင် • ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီး အသားမပတ်အမြဲနုပျိုလန်းဆန်းစေမဲ့မရှိမဖြစ် kiss water • စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေတဲ့အနမ်းရေ • သဘာဝ နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကြောင့်အသားမပတ်မိတ်ကပ်မကွက်တဲ့အချစ်ရေ
Thanakha Toner Mist (50ml)
• အဆီကင်းပြီး မိတ်ကပ်မကွက်တဲ့ အလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်စေဖို့ • မိတ်ကပ်မကွက် အဆီမပြန်လို့ တစ်နေကုန် ဖုန်ဖုန်လေးနဲ့လှနေစေဖို့ • မွဲခြောက်အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေကို bella ရဲ့ သနပ်ခါး Powder-in-toner Mist သုံးပြီး Bye Bye လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ • ချွေးပေါက်ကျဉ်း အရေးအကြောင်းကင်း အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Toner Mist
Thanakha Whitening & Oil Control – Deep Foaming Cleanser
Lip Scrub (1.2g)
• ခြောက်သွေ့ကွဲအက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေအတွက် မရှိမဖြစ် Lips Scrub • Lips Scrub လေးနဲ့ဆို နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ဖူးဖူးလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့ • ပန်းနုရောင်သန်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ • နှုတ်ခမ်းခြောက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ FA တွေ အတွက်
Baking Soda Facial Scrub (30g)
Hydra Water Gel (28ml)
Thanakha & Aloe Vera Serum Soothing Gel (175g)
Thanakha Water Recharging Sleeping Mask – Night Cream (50ml)
• ရေစို ခံပြီး နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Sun Water • နွေပူပူမှာ Sun Water ရှိရုံ နဲ့ နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီနော်… • UV ဒဏ် ကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးပြီး စေးကပ်ခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့
3-Days Acne Clear Treatment (5g)
• Salicylic Acid ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံဖြစ်ပေါ်စေသော bacteria များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ၀က်ခြံများကို သက်သာစေရုံသာမက ထပ်မံထွက်ရှိမလာစေရန် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ • Calamine ပါဝင်သောကြောင့် မျက်နှာပြင်နီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းများကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို ပြန်လည်ချောမွေ့စေပါသည်။ • ထိခိုက်လွယ်သော (Sensitive Skin) အသားအရေများပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ • Purslane Extract (ကြိတ်မှန်ရွက်) ပါဝင်သောကြောင့် ပုံမှန်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့် အမဲစက်နှင့် အမာရွတ်များကို မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်သွားစေပါသည်။ • အသား
Watermelon Micellar Gel To Foam Cleanser
အသားဖွူပွီး Glow စတေဲ့ bella2-in-1 ဖရဲသီး ဝကျခွံကငျး မကျြနှာသဈ * - Micellar Gel လေးတှကေ ရနေဲ့ ထိတှေ့ ပွီး ပှတျတျိုကျလိုကျတဲ့ အခါ နူးညံ့တဲ့ အမွုပျလေးတှေ ထှကျလာပွီး မကျြနှာမှာရှိတဲ့ မိတျကပျ ၊ အဆီ၊ဝကျခွံနဲ့ အညဈအကွေးတှေ ကို မိတျကပျဖကျြစရာမလိုပဲ မကျြနှာသဈလိုကျရုံနဲ့ အားလုံးသနျ့စငျစပွေီး ကွညျလငျစပေါတယျ
Watermelon Jelly Night Cream 50g
နရေ့ကျတိုငျးမှာ ဖွူကွညျတဲ့ Glow Glass Skin နဲ့ နိုးထ လာစနေိုငျဖို့ Jelly Night Cream - Gel Cream Formula ဖွဈတာကွောငျ့ အဆီပွနျတတျသူမြားနဲ့လညျး အဆငျပွပေါတယျ - နလေောငျဒဏျကွောငျ့ မဲညဈနသေော Skin တှကေို ရဓေါတျဖွညျ့ပေးပွီး စိုပွေ ဖွူဝငျးစပေါတယျ - တဈနတေ့ာကုနျဆုံးသှားတဲ့ ရဓေါတျကို ညအိပျခြိနျမှာ ပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးပွီး ကွညျလငျဝငျးပနစေပေါတယျ
Watermelon Jelly Night Cream 5g
Watermelon Soothing Gel 175g
Watermelon Jelly Serum 5g
Watermelon Jelly Serum 30ml
Watermelon Jelly Mask 18g
Watermelon 2-In-1 Toner Serum (75ml)
All in one (Oil Control Whitening Face Wash) (40g)
1.Acne-free, white and refreshing face
2.Contains Vitamin-C to brighten and whiten skin
3.Contains Menthol to remove bacteria and giveacool feeling
4.Contains Korean Ginseng to provide refreshing power
5.Regulates oily skin, cures acne and blemishes and whitens skin
Daily wash : Apply on wet face, rinse with water.
All in one (Oil Control Whitening Face Wash) (90g)
4 in 1 Cleasing Gel (40g)
The power of Korean Ginseng strengthen to skin, prevent aging and rejuvenate.
It removes bacteria and impurities from the skin.
Save time and money with side-by-side comparisons of carriers.
4 in 1 Anti-Bacterial Cleansing Gel to keep your scalp full of energy in one go
4 in 1 Cleasing Gel (80g)
4 in 1 Cleasing Gel (180g)
Bella Men3in 1 Anti-Acne Whitening Mud Foam (40g)
The 1st3in 1 Charcoal cleanser for oily skin from bella MEN powered by black charcoal, beads and clay.
Fight oil, dullness and blackheads optimally.
Scrub : Apply on wet face, massage in circular motion, rinse off.
Mask : Apply on dry face 2-3 timesaweek. Leave on skin and allow to dry for 30 seconds, rinse off.
Bella Men3in 1 Anti-Acne Whitening Mud Foam (90g)
Bella Men All in One Face Gel (5g)
The Multi-Action Power of All-in-One Face Gel whitens oily, acne-free and whiten the skin.
Contains Korean Ginseng to protect against dust and dirt Hydra-Soothing fluid,anon-greasy moisturizing, repairs and nourishes skin.
Use the All-in-One Face Gel with 12 benefits forapowerful day.
Bella Men All in One Face Gel (40g)
Hand Sanitizer (30ml)
Hydra Water Gel 5g
Thanakha Water Recharging Sleeping Mask – Night Cream (5g)